Zonke izinkomo, izimvu, izimbuzi, izintshe, izingulube namahhashi kumele zifakwe uphawu lokukhomba, ngokusho kwe-Animal Identification Act (Act 6 of 2002). Ukutholakala kwezilwane akukona kube lula kubanikazi ukuthi bavuselele izilwane ezilahlekile noma ezebiwe, kodwa futhi bashushise amasosha esitokisi.
Abalimi kudingeka bafake isicelo sokuthola uphawu lokubhaliswa kuMbhalisi wezilwane Ukutholakala eMnyangweni kaZwelonke wezolimo, amahlathi namaHlathi. Ngaphandle kwabalimi bezinkomo, okumele babhalise noma barekhode izilwane zabo ngeSouth African Stud Book and Livestock Association.
Amafomu okufaka izicelo atholakale emahhovisi e-extension, amahhovisi kamantshi, ama-stock units ukweba emisebenzini yamaPhoyisa aseNingizimu Afrika kanye noMbhalisi wezilwane. Izicelo kumele zihambisane nobufakazi bekheli - azikho ezinyangeni ezintathu.
Uma sekutholiwe, kuthatha cishe amasonto amabili uMbhalisi ukuba abhalise uphawu kuMsakazo kaZwelonke WokuBhaliswa Kwezilwane lapho kutholakala khona uMnyango Wezepolitiki waseNingizimu Afrika kuphela.
Uphawu lokukhomba luhlukile kumnikazi ngamunye futhi aluqukethe izinhlamvu ezintathu (izinhlamvu noma izimpawu). Akekho ongasebenzisa le mark yokukhomba ngaphandle kwemvume yomnikazi. Uma uphawu ludluliselwa komunye umuntu, umnikazi omusha kufanele afake isicelo sokudluliselwa.
Imithetho eqondile ikhona, ilawula ukuma kwesayizi, iphethini kanye nokwakhiwa kwamamaki okuhlonza kanye nendlela izingxenye ezithile zesilwane ezinganakwa ngazo noma ezingabonakali. Ama-Tattoos, isibonelo, angadluli ama-20 mm ngobubanzi noma ubude, kanti amanothi womkhiqizo kufanele abe ngaphezu kuka-40 mm futhi angabi ngaphezu kuka-100 mm ububanzi nangaphezulu.
Ngokwe-National Stock Theft Prevention Forum, izilwane zidinga ukufakwa uphawu phakathi kwamasonto amabili ngemuva kokuthengwa.
Izinkomo zingabhalwa phansi kusukela enyangeni eyodwa futhi zibekwe ezinyangeni eziyisithupha. Kudingeka ukuthi babekwe uphawu ngenkathi i-incisors yabo yokuqala ebonakalayo (i-pair-tooth stage). I-tattoo ingahle ibekwe endlebeni, kanti noma iyiphi ingxenye ebonakalayo yomzimba, ngaphandle kwentamo, ingafakwa uphawu. Abalimi kufanele baqaphele ukuba bangabi izingxenye zomzimba ezingaba nomthelela omubi ekubalukeni kwefihla.
Isitokisi esincane, njengezimvu nezimbuzi, kanye nezingulube, kufanele zidwetshwe inyanga eyodwa ubudala, ne-tattoo ibekwa noma yiyiphi indlebe.
Izintshe zingabhalwa phansi kwamaphiko azo, kusukela ngenyanga eyodwa kuya kwezinyanga eziyisithupha ubudala. Bangase babekwe uphawu kusukela ezinyangeni eziyisithupha ngaphandle kwethambo labo. I-brand noma i-tattoo ingaba nezinhlamvu ezimbili kuphela, lapho izinsimbi zifakwa eceleni kwe-6 mm, mhlawumbe ezansi noma ngezansi komunye nomunye futhi izinhlamvu ze-tattoo zibekwa eceleni komunye nomunye.
Amahhashi angabhalwa phansi kusukela ezinyangeni eziyisithupha futhi ashicilelwe kusukela ezinyangeni eziyishumi nambili ubudala.